Nezvedu - Ningbo Boyu Isina Mvura Chigadzirwa Co., Ltd.
Ningbo Boyu isapinda zvinhu Co., Ltd.
Ningbo Boyu isapinda zvinhu Co., Ltd. A nyanzvi mugadziri inova kutsvakurudza uye kukura, productionand okutengesa mune rimwe emakambani. iri Chongshou maindasitiri nzvimbo Cixi Ningbo, pamwe yakakunakira chokufambisa kuwana.
Main zvigadzirwa polyurethane grouting furo, isina mvura membrane, grouting jekete packers, grouting pombi, girizi minyatso uye zvakare zvikamu. Unyanzvi 120,000,000 zvidimbu jekiseni packers, Zvese zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neyepasi rose mhando zviyero uye zvinokosheswa zvikuru mumhando dzakasiyana dzemisika dzakasiyana pasirese.
Zvakakwana mvura, mhando ndiyo tsika yedu. yakagadzirirwa odhi sevhisi sevhisi. Tinogamuchirwa noushamwari kubvunza kwako kwenguva refu bhizinesi hukama, Kubatana, kusimudzirana.
Isu tinotarisa mukugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvemisika yekumusoro-kumagumo.Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana nematanho epasi rose, uye anonyanya kutumirwa kuEurope, America, Japan nedzimwe nzvimbo dzepasirese.
Tine rakasimba R & D timu, uye isu tinogona kukudziridza uye kuburitsa zvigadzirwa zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli iyo vatengi vakapihwa.
Tine yedu fekitori.Saka tinogona kupa mutengo uye zvigadzirwa zvakananga.
Tine yekugadzira mutsara wejekiseni packers, uye jekiseni pombi muchina. uyewo zvikamu. Polyurethane furo uye isina mvura membrane zvinhu.
Yedu yegore yekugona kugona inopfuura 80,000,000, pcs .we tinogona kusangana nezvinodiwa zvevatengi vakasiyana nekutenga huwandu hwakawanda.
Kwemakore, nesimba rakasimba rehunyanzvi, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakakura, uye nehurongwa hwakakwana hwebasa, takawana kusimudzira nekukurumidza, uye indekisi dzehunyanzvi pamwe nemhedzisiro yezvigadzirwa zvave zvichisimbiswa zvizere nekurumbidzwa nevazhinji vashandisi, uye vakawana chitupa chemhando yepamusoro zvigadzirwa, uye vava bhizinesi rinozivikanwa muindastiri.
Mune ramangwana, kambani ichaenderera ichipa kutamba kuzere kune zvayakanakira, ichigara ichitevedzera gwara re "kutungamira musainzi uye tekinoroji, kushandira musika, kubata vanhu nekuvimbika nekutevera kukwana" uye hunyanzvi hwehukama hwe "zvigadzirwa vanhu ", vachigara vachiita hunyanzvi hwekugadzira zvinhu, zvishandiso zvekushandisa, hunyanzvi hwekushandira uye manejimendi nzira, uye vachiramba vachigadzira zvigadzirwa zvinodhura kuzadzisa zvido zvekusimudzira mune ramangwana. Kuburikidza nehunyanzvi hwekuramba uchigadzira zvigadzirwa zvinodhura kuti uwane zvinodiwa mukusimudzira mune ramangwana, uye nekukurumidza kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, zvakaderera mutengo ndiko kutsvaga kwedu kusingaperi kwechinangwa.